Andry Andriantongarivo : Mersenera mpandrahona mpanao gazety -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Andriantongarivo : Mersenera mpandrahona mpanao gazety
Tandindomin-doza tanteraka ny asa fanaovan-gazety ankehitriny. Mampiasa mersenera mitam-piadiana mantsy ny hainoamanjerin’ny mpanongam-panjakana, ka sahy mandrahona sy mampihorohoro mpanao gazety am-perin’asa tahaka izay nitranga tetsy amin’ny lapan’ny Antenimieran-doholona, ankoatra ny fandrahonana amin’ny alalan’ny facebook sy ny tambazotra. Tsy iza izany mersenera izany fa i Andry Andriantongarivo izay tsy ao anatin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety kanefa tazana sy nandray anjara hatrany tamin’ireny hetsika fanakorontanana nafenina tao ambadiky ny hoe “fitakiana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra”.
Porofo mitohoka amin’ny tenda ny zava-nitranga teny amin’ny Antenimieram-pirenena ny volana Jolay 2016 teny Tsimbazaza. Andry Andriantongarivo no anisan’ireo namaky ny vavahadin’ity andrim-panjakana ity rehefa nosakanan’ny mpitandro filaminana. Mbola izy ihany koa no nandrahona ny mpanao gazetin’ny On Air Radio teo amin’ny lapan’ny Antenimieran-doholona taorian’ny valan-dresaka nataon’ny filohan’izany andrim-panjakana izany, Honoré Rakotomanana, ny tenany hatrany koa no mamoaka fandrahonana any amin’ireny tambazotra facebook ireny miaraka amin’i Maherilanto Manandafy (zanak’i Manandafy Rakotonirina).
Koa mitaona sy miantso ny Holafitry ny Mpanao Gazety handray ny andraikiny manoloana izao fampidirana mersenera eo amin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety izao izay sady loza mitatao ho an’ny mpanao gazety no manaratsy endrika ny asa fanaovan-gazety eo imason’ny mpiara-belona. Mangataka amin’ny mpitandro filaminana ihany koa hanamarina ny fitaovam-piadiana eny am-pelatanan’ity mersenera ity izay miteraka horohoro sy tahora ho an’ny mpanao gazety nahazo fandrahonana avy tamin’ity antsoina hoe Andry Andriantongarivo ity.
Marihana moa fa efa tafapetraka eny anivon’ny mpitandro filaminana ny « plainte de réserve » mikasika ilay fandrahonana nataon’i Andry Andriantongarivo tamin’ny mpanao gazetin’ny On Air Radio ny alatsinainy 9 Oktobra 2017 tetsy amin’ny lapan’ny Antenimieran-doholona.